IKBZ, Mitsui Sumitomo Form Insurance Joint Venture | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceIKBZ, Mitsui Sumitomo Form Insurance Joint Venture
IKBZ, Mitsui Sumitomo Form Insurance Joint Venture
IKBZ Insurance signedapartnership agreement with Japanese giant Mitsui Sumitomo Insurance (MSI) on December5to formajoint venture called KBZ MS.
MSI has takena10 percent share in KBZ MS, with an option to increase its holding in future. Under Myanmar law, foreign investors can own up to 35 percent ofajoint venture withaprivate local insurer.
“We are very proud to be the market leader in the industry, but we also understand that as leaders we need to constantly improve and expand our capacity to serve others,” said KBZ MS vice chairman U Nyo Myint. “This was the primary reason for joining forces with Mitsui Sumitomo Insurance and to further redefine the standards of insurance in Myanmar.”
Myanmar’s promising economic growth is creatinganew middle class that is transforming the local insurance market, which is projected to grow 30-fold within the next 10 years. Insurance is expected to account for five percent of the country’s GDP by 2030.
Operating in over 40 countries, MSI brings to the partnership more thanahundred years’ experience in the insurance sector as well as the latest technological innovations in the market.
Noriyuki Hara, Representative Director, President and CEO of MSI, said: “By leveraging MSI’s global network and leading experience in the ASEAN region, together with KBZ Group’s strong network and brand value in Myanmar, we aspire to developaworld-class premier insurance joint venture that will contribute sound development to the insurance industry and economic growth in Myanmar.”
IKBZ has 21 branches in 19 cities including Yangon, Mandalay, Naypyidaw, Taunggyi, Pyay, Pathein, Sittwe, Magway, Meikhitlar, Pakkouku, Monywa, Kalay, Myitkyinar, Lashio, Bago, Mawlamyine, Myeik, Myingyan and Tachileik. It offersafull range of general insurance products from motor to property, fire, shipping and health insurance for individuals and groups and expects to launch new products through the joint venture by 2020.
ပြည်တွင်း အာမခံ ကုမ္ပဏီ IKBZ Insurance နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Mitsui Sumitomo Insurance တို့ဖက်စပ်လုပ်ငန်း သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ထိုး
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော IKBZ ပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် MS&AD Insurance Group ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”) မှ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် KBZ MS အတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနက မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရင်းနှီးမြှုပ်မှုတစ်ခုလျှင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ထိတိုးမြှင့်ကာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း သဘောတူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုခဲ့သည်။
MSI သည် KBZ MS တွင် ၁ဝရာခိုင်နှုန်း ကို ထည့်ဝင်ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ၎င်း၏ ရှယ်ယာပမာဏကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့ ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူသလို ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတွေဟာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်နေရမှာ ဖြစ်ပြီး တခြားသူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အင်အား နဲ့ ကူညီပေးရမယ် လို့နားလည်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ Mitsui Sumitomo Insurance နဲ့လက်တွဲ ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပဏာမရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းရဲ့ စံချိန် စံညွှန်းတွေ ကို ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လည်း ပါပါ တယ်” ဟု KBZ MS ရဲ့ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးညိုမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
KBZ MS က မြန်မာနိုင်ငံ၏အာမခံဈေးကွက်နှင့် ပတ်သက်သည့်အလားအလာ ကောင်းများနှင့် ပတ်သက်ကာ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်း သည် အာမခံထားရှိမှု အတွက် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် MSI သည် ယခုဖက်စပ်လုပ်ငန်း အတွက်အာမခံ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဈေးကွက်တွင် အသုံးပြုနေသည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှှုများကို တပါတည်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“MSI ရဲ့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကွန်ယက် နဲ့ အာဆီယံ ဒေသတွင်းမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို KBZ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ကွန်ယက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် စတဲ့အင်အားတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အာမခံလုပ်ငန်း တင်မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ကြံ့ခိုင်တဲ့တိုးတက်တဲ့ အခန်းက အနေနဲ့ပါဝင်မည့် ဒီကမ္ဘာ့အဆင့်မှီပထမတန်း အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုပေးမယ့် ပူးပေါင်းမှု ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရမယ် ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု MSI ၏ Representative Director, President and CEO ဖြစ်သူ Mr. Noriyuki Hara က ပြောကြားခဲ့သည်။
KBZ MS အနေဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး ကို ချဲ့ထွင်သွားရန်လည်း မျှော်မှန်းထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ လာမည့် ၁၂ လအတွင်း KBZ MS ၏ ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှု ကို ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် KBZ MS တွင် ပြည်တွင်းအာမခံဈေးကွက်ကို ခေါင်းဆောင်မည့်သူကို အခိုင်အမာအတည်ပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများမှ တဆင့် ယခုအမှတ်တံဆိပ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကို လူအများသိရှိလာစေရန် အကူအညီပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားသည်။
လက်ရှိတွင် IKBZ အနေဖြင့် မြို့ပေါင်း (၁၉) မြို့ တွင် ရုံးခွဲပေါင်း (၂၁)ခုဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Previous articleTanintharyi Region Poised for More Development
Next articleLululemon’s New Product Investments Hit Profit Forecast